सधैं फिट आमाबाबुले धेरै ध्यान र जानाजानी छोराछोरीको जूता को विकल्प द्वारा। यो चिसो दिनमा सहित बच्चा को आराम निर्भर गर्दछ। Hypothermia, र विशेष तल्लो limbs, सर्दी र अन्य अप्रिय रोगहरु संग fraught हुन सक्छ। साथै, जाडो जूता सक्रिय प्ले बेला बच्चा को आन्दोलन hamper छैन ताकि, सहज र हल्का हुनुपर्छ। यस्तो र snoubutsy छन् "Demar"।
गुणस्तर र डिजाइन शीर्ष सधैं
एक पोलिस कम्पनी चिरपरिचित "Demar" सारा परिवारको लागि विश्वसनीय र उच्च गुणवत्ता जूता को उत्पादन मा अनुभव को 25 भन्दा बढी वर्षसम्म। रूस मा, यो बच्चाको मोडेल, कठोर जाडो महिनामा लागि आदर्श हो जो लोकप्रियता धन्यवाद प्राप्त गरेको छ। कम्पनी र रबर जूता, उज्ज्वल रंग लामो रूसी उपभोक्ताहरु को रुचाउनु भएको छ कि उत्पादन गर्छ।
गुणस्तर र लागत को सही सन्तुलन तपाईं जूता फरक आय स्तर संग आमाबाबुले यो ब्रान्ड किन्न अनुमति दिन्छ। यो जूता एक उत्कृष्ट गुणस्तर, स्थायित्व र बल छ देखि समीक्षा "Demar" (snoubutsy) सकारात्मक दिनुभयो। सबै भन्दा लोकप्रिय जाडो मोडेल र उनको गुण यो लेखमा मानिन्छ।
snoubutsy के हो?
यस प्रकारका जाडो जूता आफ्नो bulkiness र मोटाइ सामान्य जूता तलवों फरक। तिनीहरूले बन्द-सत्र, गंभीर वा slushy जाडोयाम लागि आदर्श हो। निर्माता र प्रकार snoubutsy +5 -30 डिग्री को एक तापमान सीमा लागि उपयुक्त आधारमा।
उपस्थिति को "Quilted" जवानहरू 90 को दशक मा लगाएका जसमा धेरै reminiscent यी प्यारा जूता। को नालीदार बाक्लो एकमात्र snoubutsov भिजेको र भौचर प्राप्त जोगाउँछ, र भित्री सम्मिलित फर सुरक्षित गर्मी पनि कायम रहन्छ।
जूता तीन तहहरू हुन्छन्:
बाहिरी आवरण पनरोक सामाग्री गुणवत्ता बनेको छ;
मध्यवर्ती पत्र अतिरिक्त गर्मी राख्ने जो एक नवीन सामाग्री, comprises;
भित्री प्राकृतिक ऊन वा अन्य इन्सुलेशन बनेको छ।
Snoubutsy "Demar": छोराछोरीको मोडेल विवरण
यो ब्रान्ड को जूता को जाडो चिसो मा अपरिहार्य छन् सबै गुणहरू जोडती। विनिर्माण snoubutsov लागि मात्र उच्च गुणवत्ता सामाग्री जो उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन गुण प्रयोग गरिन्छ।
रबर सीमा को परिधि वरिपरि उच्च रिम चिस्यान मा आउन अनुमति र मूल कायम रहन्छ छैन जूता को प्रकारको एक धेरै लामो समय को लागि। सबै मोडेल, धेरै हल्का जूता बच्चाहरु अप्ठ्यारो महसुस छैन गर्न अनुमति दिन्छ छन् मजा चल्छ समयमा चलिरहेको।
Snoubutsy "Demar" प्राकृतिक भेडा ऊन पृथक, त्यसैले बच्चा गंभीर frosts चिसो महसुस हुँदा पनि छैन। माथिल्लो पानी विकर्षक तह यसको उद्देश्य संग copes र पनि भारी पग्लदै गरेको हिउ अन्तर्गत चिस्यान गरौं गर्दैन। एकमात्र उच्च गुणस्तरीय थर्माप्लास्टिक रबर को गरे, टिकाउ छ।
तपाईं निस्सन्देह, देश को उत्तरी क्षेत्रहरु बस्नुहुन्छ भने, snoubutsy "Demar" चयन गर्नुहोस्। तापमान, यो ब्रान्ड को जूता लगाउन सिफारिस - -30 डिग्री तल।
तपाईं एक मोटी insole महसुस बनेको उठाउनु भने, तपाईं जूता भित्र खोक्रो घन देख्न सक्छौं। को खुट्टा र बच्चाको खुट्टा बीच थर्मल इन्सुलेशन को एक पत्र सिर्जना भनेर यस गरेको छ। तर, तपाईं जानाजानी को puddles मार्फत हिंड्न snoubutsah गर्नुपर्छ भनेर सजग हुन। यी उद्देश्यका लागि यो इन्सुलेशन संग रबर जूता किन्न राम्रो छ।
"Demar हिम आँधीको» मोडेल
यस प्रकारको एक विशिष्ट सुविधा राम्रो बच्चालाई खुट्टा को चौडाई द्वारा नियमन जुन snoubutsov बाक्लो डबल Velcro छन्। माथिल्लो सम्मिलित प्राकृतिक सामाग्री बनेको - nubuck। भित्र जूता ऊन गुणस्तरमा छोट्याउन र Bootleg सामाग्री को एक राम्रो आपूर्ति, छोराछोरीको खुट्टा विभिन्न widths लागि डिजाइन छ।
यो मोडेल प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, र बच्चा स्वतन्त्र धारण वा आफ्नो जूता बन्द लिन सक्नेछन्। यो सिर्फ किंडरगार्टन जाँदै सुरु गर्ने एक बच्चा लागि विशेष गरी साँचो हो। बेल-अप जूता संग, त्यो सामना गर्न असम्भाव्य छ, र सुविधाजनक Velcro एक पैदल लागि आउन कुनै समस्या बिना यो अनुमति दिन्छ।
जूता "Demar आनन्द»
यो मोडेल कम वृद्धि, माथि 25-गेज संग बच्चाहरु को लागि मात्र उपयुक्त छ। बच्चाहरु snoubutsy "Demar आनन्द» दुई रंग मा laces र उपलब्ध संग निश्चित - सेतो र खाकी। दुवै पक्षले जूता लोचदार बैंड मा सहज घन्टी हो। यो छिटो मा laces मुद्दा र कस एक विस्तृत आफ्नो खुट्टा कस गर्न अनुमति दिन्छ।
Snoubutsy "Demar नर्डिक"
मात्र सकारात्मक - आमाबाबुले जसको बच्चाहरु को समीक्षा यी जूता लगाएका छन्। Snoubutsy रातो र मा प्रस्तुत नीलो रंग र केटाहरू लागि थप उपयुक्त हो। आयोमी जाल 17 22.5 सेमी (25-35 मिनेट आयाम) को खुट्टा लम्बाइ मा गणना। शीर्ष snoubutsov पनरोक कपडा सामाग्री गरे। एकमात्र रबर, धेरै लचिलो र सजिलो। सुविधाको लागि अगाडि एक छोटो सर्प स्थित छ।
जूता "नर्डिक" एक विशेष दुई-पत्र सामाग्री र एल्यूमीनियम पन्नी बनेको सम्मिलित हुन्छन् कि एक हटाउन सकिने भित्री मोजा छ। तपाईं आफ्नो बच्चा एक कठिन चिसो समयमा सहज महसुस गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यी "Demar" snoubutsy खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। "नर्डिक" को मोडेल मा गणना गरिएको छ जो तापमान, - -35 डिग्री तल। एक मोजा हटाउँदै, तपाईं एक विकल्प Demi-सिजन जूता, जो छैन puddles र अप्रिय शरद ऋतु चिसो डराएका पाउनुहुन्छ।
"Demar हिम पुरुष» मोडेल
सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रिय बच्चाहरु मोडेल ठ्याक्कै यो छ। यस्तो snoubutsy उज्ज्वल रंग मा प्रस्तुत, वृद्धि मा एक विस्तृत लोचदार ब्यान्ड छ। को बुट बेल को शीर्ष थप अनुबंधित गर्न सकिन्छ, र दृढ क्लिप समाधान।
तर, यो मोडेल खरिद गर्ने केही आमाबाबुले, यो सबै भन्दा राम्रो समीक्षा गर्न बाँकी छैन। "Demar" (हिम पुरुष snoubutsy) भर्खरै हिंड्न सुरु गरेका बच्चाहरु को लागि उत्तम हो, र यो बच्चाहरुका लागि उपयुक्त छैन। विस्तृत Velcro मा अक्सर unbuttoned र सक्रिय प्ले बेला बच्चा को आन्दोलन रोक्छ।
जूता "Demar Toby»
बालिका र केटाहरू लागि - यी गुलाबी र नीलो रंग मा प्रस्तुत snoubutsy। चिस्यान गर्न ज्यादा देखि ज्यादा प्रतिरोधी छ जो चमकदार सेतो सामाग्री गरेको जूता को बाहिरी पक्ष। जुटाउने मोडेल व्यापक लोचदार ब्यान्ड संग सुसज्जित छ। भित्री भाग snoubutsov राम्रो तह प्राकृतिक sheepskin पृथक र महसुस insole हटाउन सकिने छ।
आमाबाबुले को राय मा, यो मोडेल उच्च वृद्धि बच्चाहरु को लागि उपयुक्त छ, तर बाहिरी गम खराब खुट्टा राख्छ। साथै, थुप्रै मानिसहरूले रुचि छैन को पास फिट: बुट एक विस्तृत शीर्ष छ र पूर्ण टखने कवर गर्दैन।
आकार कसरी चयन गर्ने?
यी जूता सुन्दर उपस्थिति, उच्च गुणस्तर र उत्कृष्ट समीक्षा प्राप्त। "Demar" (snoubutsy) सबै दुनिया भर देखि ग्राहकहरु जीत व्यवस्थित। तथ्यलाई जस्तै विशेष गरी धेरै आमाबाबुले सबै मोडेल दोहरी आयाम छन्। को बुट एउटा सानो मार्जिन यो धेरै सजिलो वसन्त सम्म तिनीहरूलाई लगाउन बनाउने, बच्चाको खुट्टा वृद्धि लागि डिजाइन गरिएको छ।
, आकार मा गलत छैन हुन सबै माप सधैं एक गणनामा स्थिति, साँझ गर्नुपर्छ। कागज, पूर्व-लगाएका मोजा टुक्रा मा खडा गर्न आफ्नो बच्चा सोध्नुहोस्। को आकृति पेन्सिल खुट्टा, एक पक्ष गर्न झुकाव छैन सर्कल। उच्चतम बिन्दु, को औंठी र एडी, दुई तेर्सो रेखा कोर्न र तिनीहरूलाई बीच दूरी मापन जहाँ। यो तपाईंको बच्चाको खुट्टा को लम्बाइ हुनेछ। जाडो जूता छनौट गर्दा यो आंकडा 1-1.5 सेमी थपियो गर्नुपर्छ।
सधैं दुवै खुट्टा मापन। दुई अध्ययनहरू एक महत्वपूर्ण फरक छ भने, ठूलो संख्या लीन। त्यसपछि तपाईं गलत जानुहोस् र आफ्नो बच्चाको लागि आदर्श छ कि snoubutsov आकार चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
जूता "Demar": आयोमी ग्रिड (snoubutsy जाडो)
आकार "Demar" जुत्ता को insole, सेमी को लम्बाइ
किनभने सजिलो हेरविचार को snoubutsy जस्तै धेरै जवान आमा। बस एक नम कपडा संग हटाउन - र तिनीहरूले एक पटक मूल preppy नजर फेरि लिन्छन्।
कृतज्ञ आमाबाबुले बस यो कम्पनी सकारात्मक प्रतिक्रिया को उत्पादनहरु मा बायाँ छैन। "Demar" (snoubutsy) जाडो लागि आदर्श जूता, तर पनि बच्चाहरु संग धेरै लोकप्रिय छन्। सबै मोडेल उच्च गुणवत्ता र उत्कृष्ट वेयर प्रतिरोध को हो। एक उज्ज्वल रंग र चिकना डिजाइन बिना मौसम को बच्चाहरु सुशील र आकर्षक हेर्न अनुमति दिन्छ।
"Paranit" (स्याम्पु) - समीक्षा। जुम्रा शैम्पू
कालो चिया पत्ती: के उपयोगी र कसरी बनाउँने छ
जो टेस्टोस्टेरोन स्तर मा वृद्धि असर?
जीवनी Alena Bondarchuk र यसको रचनात्मक उपलब्धिहरू
जर्मन संविधान। युद्धपछिको जर्मनी को राज्य संरचना
दोषी। कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न?